Heshiiskey Puntland Geeddi ka Diidday oo Deeroow Qalinka ku Duugay
Fiicnaanlahaydaa in madaxda Puntland ku sharfilahad Geeddi inuu saxiixo heshiiska Deeroow saxiixay. Waa sida loo dhaho talo aan la ruuggin waa lagu rafaadaa. Siyaasiyiinta Puntland baa hal dhagax kuwada dhuftay Geeddi iyo Maxamed-dheere. Mar haddii wixii Geeddi loo diiday lagu casuumey Deeroow waa dakhar soo gaaray Geeddi. Waxaa ka sii horreeyey, Deeroow oo heshiiskii Maxamed-dheere iyo Yuusuf Indho-cadde ku sheegay mid lagu boobayo dhulka Digil iyo Mirifle. Marka didmadii Deeroow ka soo qaaday Jowhar iyo Maxamed-dheere waxay geyaansiisay in lagu sharfo saxiix aan u arko inuusan xaq u lahayn ama keligiis khuseyn. Toddobada qoddob oo heshiiskaas lagu sheegay waxay u badanyihiin arrimo ku saabsan dakhli, canshuur iyo dhaqaale. Labo qoddob oo ka mid ah ayaa laga dhex arkayaa wax ku saabsan federaalnimo. Ogoow, mar kasta oo laga hadlayo Soomaaliya waxaa la oranayaa dowladda federaalka ku-meelgaarka ah marka ma Cabdalla Deeroow baa soo boodaya markastoo magaca federal la xuso?
Maddaama, C/hi iyo Geeddiba raaligelin ka bixinwaayeen hadalkii Cabdalla Deeroow ee heshiis-diidka ahaa ayaa la arkayaa isagoo Puntland lagu soo dhoweynayo laguna sharfayo saxiixa heshiis muhiim ah. Arrinta Deeroow ayaa baasiin ku sii shubaysa arrimaha dib-u-heshiisiinta; xurgufaha ku saabsan meesha shirka lagu qabanayo darteed. Waxaa shalay oo bishu ahayd 28/12/05 shir jaraa’id Jowhar ku qabtay xildhibaanno Soomaaliyeed oo sheegaya inaan Kismaayo shir lagu qabankarin maxaa yeelay Barre Hiiraale wuu diiday inuu Jowhar yimaado oo uu arko ra’iisulwasaarihiisa sidoo kalana waa nin ka soo horjeeda dowladda. Arrintaas ayaa u muuqata mid lid ku ah midda Boosaaso ka socota ee ku saabsan heshiiska Puntland iyo Deeroow. Waxaan shaki iiga jirin inuusan Geeddi u dirin arrintaas inuu Deeroow galo laakiin waa iska dhacikartaa inuu in inta Geeddi is hafro uu been ku sheego inuu isagu diray wasiirkaas.
Waa fallaartii cirka loo ganay nin kastoow filo. Marka haddii siyaasiyiinta reer Puntland ay dhaqaalahoodii ku lumiyeen si C/hi madaxweyno u noqdo, maxay hadda u sameynayaan falal liddi ku ah dowladda C/hi? Waxay i xasuusineysaa sheekadii wiilkii yaraa ee ku ciyaaray oday tukanayey dabadeedna markii odaygii salaaddii dhammeystay wiilkii lacag siiyey oo uu ku yiri: adeer bal ninkaas kaloo tukanaya ku samee waxaad igu sameysay. Wiilkii oo lacag kale doon ah ayaa ku ciyaaray ninkii kale laakiin nasiib darro markii ninkii kale salaaddii dhammeystay buu wiilkii yaraa qudha ka jaray. Run ahaantii, falsafadda ka socota Puntland waxay iila muuqataa taas oo kale. Marka, hadduu korneylku arkijiray dadka reer Puntland oo iska tartiibsada, suurtogal ma ahan inuu sidaas oo kale kala kulmo Koonfurta Soomaaliya.
Khaladaaadka Geeddi badanaa? Maalin kasta oo waagu baryo waxaan helaa khalad uu leeyah ra’iisulwasaarahu. Marka haddii Geeddi been sheegilahaa iyo haddii kalaba isagaa laga rabaa siduu uga jawaabilahaa labadii arrimood ee Deeroow sameeyey. Marka arrintu waa “uureysatee waxay umuli doonto”.
Wasiirradii Dolwadda oo Dib-u-heshiisiintii Diiday iyo Khudbo uu Maxamed-dheere Diyaarsaday oo naloo soo Dusiyey .... Guji
Idaacada Australia ee SBS oo Waraysatay Garsoorayaasha ay Xirtay DGPL
Waraysiga oo idaacadu ay Telefoon kaga qaaday garsoorayaasha oo ku jira Xabsiga... DHEGEYSO WARAYSIGA
Dr. Alnajjar oo Aad uga Dayriyey Xaalada Soomaalida....sept 2